vpn - MYSTERY ZILLION
အခုတလ​ော Your freedom apk ဆိုတာ​တ​ွ​ေ့​န​​ေ ရတယ​် ဗျ။
free internet သံုးလ္​ို ရတယ် လို​​​ပြ​ော တယ်။
vpn သံုးပြီး tunnel ​ဖ​ောက် ပြီး ဆွစ်ဇလန တ္​ို အ​​​ေမရိကနိ တိုက SERVER ဆီ ဆက် ပါ တယ်။ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား ။
ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံကို ကြည့်ရင် သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
Yourfreedom ကို https://www.your-freedom.net/index.php?id=3 မှာ download ချလို့ရပါတယ်။
ဒါနဲ Internet က ​ဘ​ေမကု ်န ဘူး ဆို။ ဟုတ်ရဲလား။
No. It will cost Internet Bill. It still use your internet.